Laggasaa Wagii - Wikipedia
Laggasaa Wagii (? - 2008) miseensa ABO fi qabsaawaa mirga Oromooti. Laggasaa Wagii ABO keessatti sadarkaa adda addarratti kan hojjate yoo ta'u qabsoorratti bara 2008 lubbuunsaa dabarte.
Laggasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo ga'u mana baruumsa sadaarka tokkoffaa Bakkamee jedhamuuti kutaa tokkoo hanga afurii barate. Barnoota isaa kutaa shanii hanga saddeetii ammoo mana barumsaa Hinccinniitti barate. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa kudha tokkoo hanga kudha lamaa magaluuma Finfinneeti barate.
Lagaassaa Wagii erga barumsa isaa haga kutaa kudha tokkootti barate booda barnoota akkaadaamii dhiisee baruumsa Makaanikummaa fi Konkoolaata oofu bara 1975 keessa barate. Oguummaa isaa kananiis hojiilee adda addaarraatti bobba'uun hojjaachaa ture. Laggaasaa Wagii hojii daldalarraatti bobba'uun magaalaa Dirree Dhawaa keessaati waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo ta'u hojiidhuuma daldala kanaaf meesha daldaala adda addaa fe’achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe.
Laggaasaan obbolaa shan kan qaba. Laggasaan, Waxbajjii 27, 1987 haadha manasaa Waynisheet Getahuun fudhe. Hadha manasaa kanarraa ijjoollee dubartoota sadii kana maqaan isaani Bilisummaa Laggasaa, Fireehiwet Laggasaa fi Nastaannat Laggasaa kan jedhamaaniis godhate.
ABOtti Makamuusaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Wagii jaalalaa guddaa ummata Oromoof qaba. Hacuccaan ummatarra ga'u boqonnaa waan isaan dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaalatu dhiisee Dhiha Oromiyaa deemun qabsoo bilisummaa hogganummaa ABOtiin gaggeeffamutti makame. Bara 1991, barumsa siyaasaa fi leenjjii waranuumma, marsaa 18ffaa gahummaan xumuratee, dirree dhihaatti miseensa ABO ta’e.
Dammaqiinsaa fi hubaannoo Lagaasa Wagii qabu irraatti hundaa’uun dhaaba keessaatti barumsa dabballummaa bara 1991 bakka Beelmuuguu jedhamuutti barate. Akka baratee ba'een dirqama dabballummaan zoonii Beegitti ramadame. Zoonii kana keessatti dirqama dabballummaa ga'umsaan osoo bahaa jiruu mootummaan Dargii kufe. Dhaabni dandeetii fi ga'umsa isaa ilaaluudhaan ona Qaaqeetti dirqama bulchiisaatti ramade. Bulchaa ona kanaa yeroo turetti, kaayyoo ABO ummata hifannaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa miseensa ta'ee fi ummata biratti jaalala guddaa nama horatee ture.
ABO mootummaa Ce'umsaa keessaa akka ba'een WBO naannoo jirutti dabalamuun diina jabinaan lolee lolchiiseera. Falmaa diinaa wajjin godhamuu haga walakkeessa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itophiyatti ba'e waliin ture. Bara 1994 humna ijaaramee walkeessaa Dhiha Oromiyaatti deebi’e keessa Laggasaa tokko ture. WBO diinaa wajjin falmaa hadhaawaa itti fufuun bara 1997 keessa oggaa mootummaan Wayyaanee magaalota Sudaan Kurmuk fi Giizan rukuttee qabattee xurreen dhiheessii akka hin cufamneef humna of duuba daangaatti deebi’ee keessa ture Laggasaan. Bara 1993-1998tti sadaarka miseensuummaarraa kaase hanga sadaarkaa qondaala waraana ol-anaati dirqaama fudhatee hojjachaa ture.
Bara 1998 keessa miseensota ABO leenjii addaaf biyya ollaatti ergaman keessaa ture. Leenjii isaa xumuratee haga ramadamutti biyya ollaa keessa Oromoota jiran akka ijaaruuf dirqamni itti kennamee ture. Akka kanatti tattaaffii Jeneraal Laggasaan godheen bara 2000 keessa Oromooti biyya ollaa keessa jiran walitti qabuun Waldaa Hawaasa Oromoo Eritrea ijaare, QBO irraa qooda akka fudhatan taassisee jira.
Laggasaa Wagiin bakka fi haala dirqaamni qabsoon isa feete hunda keessaati qooda ol’anaa nama kenna turee fi gahumaadhaan dirqaama itti kenname hunda nama baha turee dha. Akka kanaati Lagaasan bara 1998/99 irraa kaasee itti anaa moona leenjii WBO waliigalaa ta'ee hojjaacha ture. Bara 2000 irraa kaase barumsaa fi haroomsa waraanummaa, siyasaa fi tikaa erga baraate booda ajajaa WBO Zonii Dhiha J. Irreessaa Caalaa jalatti ajajaa bobbaa fi quunnamtii Oromiyaa Dhihaa ta'uun bara 2002 dirqama dhaabaa fudhatee gara dirree dhihaatti moona leenjii waliigala dhaabiicha irraa bobba’e. Sochii seenaa qabeessaa fi mootummaa Woyyaanee raase WBO bara 2002 Baddalee Dhiha Oromiyaa Qeebbe, Dambii Dolloo, Gidaamii, Beegii fi Mandii keessatti ta'aa turan irratti akka ajajaa waraanaa fi siyaasaatti hogganummaa mul’ataa kennee jira. Erga Ajajaan WBO Dhiha Oromiyaa J. Irreessaa Caalaa wareegamee boodaa hanga 2008 wareegametti ajajaa WBO Dhiha Oromiyaa ta'uun falmaa hadhaawaa fi gootummaan guutamee diina waliin ta'e hoggana waraanummaa fi siyaasaa kennaa ture.
Laggasaan dirqaama sadaarkaa adda adddaatti irra ture hunda keessaatti, gootummaan, cichoominaa fi obsaan kan dirqama isa baha ture fi fakkeenya guddaa miseensoota, qodaalotaa fi hoggantoota ABO, qabsaawoota fi sabboontoota akkasumaas ummata Oromoo hundaaf nama ta'e dabree dha.
Lagasaa Wagii, dirqama dhaabaa fudhatee zoonii dhiha keessa waan tureef KS-ABO-3ffaa (Kora Sabaa-ABO-3ffaa) bara 2004 irraa hirmaachuu baatuus bakka inni hin jirreetti miseensa GS-ABO (Gumii Sabaa-ABO) ta'uun filatame. Dirqaama fi itti gaafatamuummaa dachaan itti kenname kanaas ga'umsaa fi of-kenniinsa haga wareegaama lubbuu isaati kennun goota qabsoo ta'uu isaa mirkaneesse jira.
Lagasaan, bilchina qaburraa, tooftaa fi mala qaburraa akkasumaas gootuummaa qaburraa ummaata Oromoo hunda birraatti kan baayyee jaallatamu fi kabajaamudha. Akkasumaas, Laggasaan diina biraatti kan bayyee sodatamuu fi gootummaa fi abbaa toftaa fi mala ta'uunsaa diinoota keenyaa utuu hin jaallatin kan ragaa ba'aniidha. Mootummaan gita bittaa Itoophiyaa yeroo adda addaa humna kumatamaan lakkaawamaan, meesha gurguddaa fi humna qileensaallee osoo hin hafiin duulaa fi sakataa adda addaa yeroo itti zoonii dhihaa keessaati banaa turteetti, WBO hogganuun, hoggaansa cimaa kennuun, lolaa lolchiisaa humna diina dirree lola irraatti falmaa nama ture Laggasaan.
Laggasaa Wagii, dhumarratti kan baname: Bitootessa 31, 2015
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Laggasaa_Wagii&oldid=37211" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 20 Fulbaana 2021, sa'aa 18:47 irratti.